Umhlaba jikelele kwi-dwg-Geofumadas
Le fayile iqulethe iglobhu enomfanekiso obekwe njengempahla engaphezulu. Yapapashwa okokuqala kwibhlog ye UShaan Hurley.
Benze into eyi-3D yento eyindawo engenanto
Emva koko badala izinto ezintsha, ngokusekelwe kulo mfanekiso
Emva koko bayifaka njengesixhobo kwibala, bachaza uqikelelo lwe-cylindrical. Ukuyibona kufuneka usebenzise umbono ohanjisiweyo.
Kule meko ndiyivulile ngeMicrostation XM kuba ezinye izizathu ezingaqhelekanga zenze ukuba i-AutoCAD 2009 ixhomeke ... Ndicinga ukuba imemori yam yelaptop icela iivithamini ... kubonakala ngathi kwenzeka okufanayo kuShaan. Kodwa ungakhathali, kubonakala kunomdla.
Ukusuka apha Unokukhuphela iifayile ezixinzelelweyo eziqukethe iifayile ezimbini ze-dwg kunye nemifanekiso emibini yale kunye nolunye umbono ebusuku.
I-Geofumadas kwi-flight March 2008